Uvavanyo lwepeni olunxulumene ne-RANSAC algorithm | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-RANSAC algorithm kulingo lwepeni
Imigca kunye nemivimbo engaphezulu ukumisa ngokuthe ngcembe umfanekiso wamehlo apho, xa siwujonga ukude okanye usondeza, sinokufumana ukuba umbala ocacileyo ucaca njani. Ngaphandle kwalonto inemibala kwiqela elikhulu lemifanekiso enethoni elula.
Into enomdla malunga nolu vavanyo olwenziwe ngosiba kukuba bakho indlela yokwenza esi siphumo ngokwamanani ngokulandela i-tangents yee-curves zeemilo zeliso okanye zento esifuna ukuyimela. Isiphakamiso esinomdla esivela kumculi ongaziwa kwiwebhu efanelekileyo ngokufanelekileyo yokwazi i-RANSAC algorithm.
Inkqubo yenze ngokwamanani inokushwankathelwa ngolu hlobo:
Guqula umfanekiso ube mnyama nomhlophe
Yenza i-canvas engenanto
Zoba umgca omnye kumakhulu ambalwa eekopi zelaphu
Bala umahluko phakathi koqobo kunye nemizobo
Thatha enye ngumahluko omncinci
Inkqubo iphindaphindwe ukusuka kwinyathelo lesithathu malunga newaka lamaxesha
Ukugqitywa ngokupheleleyo, kufuneka sikwenze malunga nezihlandlo ezilikhulu kwaye ekugqibeleni sikhethe umfanekiso olinganisa imodeli ebesiyisebenzisile. Ingayindinisa, kodwa singazisindisa ukuba siyizobe ngesandla njengoko kusenzeka kulingo esabelana ngalo apha. Ewe ufuna ukugcina inkqubo, Yiza ngapha Apha.
Ekugqibeleni sithetha nge-RANSAC algorithm yapapashwa nguFischler noBolles ngo-1981 kwaye ukusukela ngoko isetyenzisiwe kuhlalutyo lomfanekiso. I-RANSAC inesakhono esingummangaliso sokubonelela ngokulunga okufanelekileyo ukusuka kwidatha engcoliswe ngamanani amakhulu ezinto ezithengiswayo ngaphandle, nangaphezulu kuneepesenti ezingama-50, lo ngumda ongenakoyiswa kwezinye iindlela zobuchule bokuqikelela.
Ialgorithm khangela imodeli efanelekileyo kuthathelwa ingqalelo zonke iipekseli zentsimbi kubandakanya nezo zingalinganiyo nemodeli efunwayo. Rhoqo ukhetha isampulu yee-pixels, apho s khona amanqaku afunekayo ukuseka iiparameter zemodeli.
Omnye Isindululo sokuyila esinomdla njengelinge. Ukuba ufuna ukwazi enye, kunyaka ophelileyo sishicilele enye yenziwe nge-CSS3D HTML5.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-RANSAC algorithm kulingo lwepeni
Amagcisa aphinda enze igumbi lika icon likaVan Gogh eArles